यो के को शक्ति हो, पानी उम्लिरहेको छ बालक हाँसिरहेका छन् !
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक बालकको भिडियो धेरै भाइरल भैरहेको छ । उक्त भिडियो हेरेर मानिसहरु धेरै प्रश्नहरु उठाइरहेका छन् ।
शनिबार, भदौ २६, २०७८ ८:२५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक बालकको भिडियो धेरै भाइरल भैरहेको छ । उक्त भिडियो हेरेर मानिसहरु धेरै प्रश्नहरु उठाइरहेका छन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
उक्त भिडियोमा, ति बालक उम्लिरहेको पानीमा हात जोडेर बसिरहेका छन् । यो डरलाग्दो घटना देखेर सबै स्तब्ध र दुखी छन् ।
यो भिडियो सेयर गर्दै एक ट्विटर प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘यो २०२१ को भारत हो ।’ सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको बिषय बनेको यस भिडियोमा, बच्चा एक कराईमा बसिरहेको देखिन्छन् । त्यसको वरिपरि फूलहरु छरिएको छ । कराईको तल ठुलो आगो बलिरहेको छ ।
अचम्मको कुरा, बच्चाको वरिपरि धेरै मानिसहरुको उपस्थिति रहँदा पनि कसैले बालकलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन् । बच्चा उम्लिरहेको पानीमा हात जोडेर आरामसंग ध्यानमा बसेका छन् ।
भिडियो हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनले केहि मन्त्र जप गरिरहेका छन् । केहि मानिसहरु ति बच्चाको साहस को प्रशंसा गर्दै छन् ।
धेरै मानिसहरु त्यसको विरोध गर्दै छन् । तर केहि मानिसहरु भन्छन् कि पानी पम्पमार्फत हावा भरेर उम्लिरहेको भनेर भ्रम सिर्जना गरीएको छ ।
एक रिपोर्ट अनुसार यो भिडियो सन् २०१९ मा पनि भाइरल भएको थियो । केहि बर्ष पछि यो फेरी भाइरल भैरहेको छ । तर, यो भिडियो कहिले र कहाँ खिचिएको हो स्पष्ट छैन ।
उक्त भिडियोमा कराईमा पानी भरेर विशेष तरिकाले पप्प जोडेर मान्छेहरुलाई भ्रममा राख्न खोजिएको छ । आगो बालेपछि सिधैं कराईसम्म आगो पुग्न सकिरहेको छैन । त्यहाँ निमार्णय भएको चुल्होमाथि पूर्ण रुपमा लेप लगाइएको छ ।
यूरिका राजभण्डारी - मङ्लबार, मंसिर २१, २०७८ ७:३८
विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र निकाल्नेगरी अहिले तयारी गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालमा पनि जनगणना गरिएको थियो ।
जनवादी गायक जीवन शर्माले नाङ्लोमा गरेको पसलको तस्बिर भाइरल ! बास्तविकता यस्तो रहेछ
यूरिका राजभण्डारी - सोमवार, मंसिर २०, २०७८ ९:२०
त्यही तस्बिर ट्वीट गर्दै प्रेम पुनले लेखेका छन्, ‘जनताका जनवादी चर्चित गायक जीवनशर्मा यसरी नाङ्ले पसल खोलेर आफ्नो जीविका चलाउछन् उनले चाँहेको भए करोडौको मालिक हुन्थे गरिब दुखि निमुखाका सारथी हुँदा छोराको उपचारसम्म गर्न हम्मेहम्मे पर्‍यो ।
फेरि लकडाउन हुने सम्भावना कति ?
यूरिका राजभण्डारी - सोमवार, मंसिर २०, २०७८ ७:१८
उनीहरु मंसिर ३ गते नै नेपाल आएका थिए । त्यसैले अहिले उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजी र परीक्षणलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
‘गोरे’का लगानीकर्ता ‘काले’लाई इन्टरपोलले नेपाल ल्यायो
यूरिका राजभण्डारी - सोमवार, मंसिर २०, २०७८ ६:२४
तर यूएईमा बसिरहेका प्रहरी नियन्त्रणमा आउन सकेका थिएनन् । पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीहरुले चाहिँ सुन तस्करीको अभियोगमा जिल्ला अदालत, मोरङबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।
बहाल लगिँदै : रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङमतीबाट पाटन त
कविर राजभण्डारी - आइतवार, मंसिर १९, २०७८ १२:५७
‘वर्षा र सहकालका’ देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई यही मङ्सिर २३ गते बुङमतीबाट पाटनको तः बहाल मन्दिर लगिने भएको छ । मच्छिन्द्रनाथलाई छ महिना पाटन र अर्को छ महिना बुङ्मती राखिने चलनानुसार तःबहाल ल्याउन लागिएको हो ।